छोरी काखीमा च्यापेकी रहमतुन निसा भन्छिन,पन्चहरु बोलाई श्रीमानले सिधै भने तलाक तलाक तलाक | bhumionline
८ वर्षिया बालिका मृत फेला
मधेशको न. १ डिजिटल खबर पत्रिका…
छोरी काखीमा च्यापेकी रहमतुन निसा भन्छिन,पन्चहरु बोलाई श्रीमानले सिधै भने तलाक तलाक तलाक
न्याय दिलाई दिनुस भन्दै भौतारिदैछिन उनी ।
जलेश्वर,भाद्र २३ गते ।
न्यायको खोजीमा काखीमा वच्चा च्यापेर बुरका लगाएकी एक महिला नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखामा पुगिन । महासंघमा ईन्टरनेटको सुविधा लिदै केहि स्थानिय समाचार लेख्दै गर्दा ति महिला भित्र आएर मलाई सोधिन हजुर तपाई पत्रकार हुनु हुन्छ ? मैले सहमतिमा सिर हल्लाए । उनी भक्कानिएर रुन थालिन । हजुर मेरो अधिकार सवै श्रीमानले खोसे आफुले अपराधै नगरेकोमा श्रीमानले गाउका केहि पन्चहरु बोलाई उनीहरुको सामुने मलाई तलाक तलाक तलाक भन्यो र घरबाट निकाल्यो । हाम्रो समुदायमा यो शव्द र त्यसको पिडा नर्क समान छ । तिन सन्तान कि आमा छु श्रीमानले विवाह दर्ता र जेठो छोराको जन्मदर्ता बनाईदिएका थिए तर नागरिकता र अन्य दुई छोरा छोरीको जन्मदर्ता समेत बनाईदिएनन अब कसरी लालन पालन गरु ति सन्तानहरुको भनेर रुदै थिईन । शान्त गर्न प्रयास गरे उनी शान्त भईन र सविस्तार सवै कुरा बताउन अनुरोध गरे ।
भारत को सितामढी जिल्लाको कन्मा गाउ माईती भएकि उनी करिव १३ वर्ष पहिले वैरगिया लक्ष्मिणिया वडा नं. १ का शेष जमसेदसंग मुस्लिम परम्परा अनुसार वैवाहिक जिवनमा बांधिएकि हुन । विहे भएको दुई तिन महिना नबित्दै श्रीमान पैसा कमाउन भनी भारत प्रवेश गरे । उनी गए लगतै सासुले विभिन्न कुरामा गाली गर्ने र कुट्नेसम्मको कार्य गर्दा समेत उनी सहदै गईन । भारतबाट ३ वर्ष ६ महिनामा श्रीमान फर्कदा उनले समेत मदिरा सेवन गरि कुटपिट गरिरहे । पछि माईतबाट दिएको केहि गहनाहरु श्रीमानले वेचे र विदेश गए । सोहि क्रममा कतार र त्यसपछि साउदी पुगे । करिव तिन महिना पहिले मात्र श्रीमान साउदीबाट फर्केका हुन । फर्के लगतै श्रीमानले मानसिक र शारिरिक यातनाहरु दिई रहे र तिमीलाई म विदेश मै छदा फोन मै तलाक दिएको कुरा गरे तर आफुले त्यो नसुनेको भन्दा ल ठिक छ तलाई म पछि बताउछु भन्दै गर्जे ।
महिला बताउदै थिईन म सुनिरहे ।
उनी आफ्नो कुरा थप्दै भनिन पटक पटक मलाई घर निकाला गरिरहदा महोत्तरी स्थित महिला तथा वालवालिका सेवा केन्द्रमा निवेदन समेत दिए र सोहि क्रममा भाद्र ६ गते हामी दुवै पक्षविच आपसी समझदारीमा मिलापत्र भयो । तर त्यो मिलापत्र मेरो ससुराली पक्षले मलाई उनको घरमा लगि तलाक दिने बहाना मात्र थियो । गत ९ गते मलाई गाउका केहि महिला र पुरुष घरमै श्रीमानले बोलाएर उनको सामुने नै तलाक तलाक तलाक भनेर मुस्लिम परम्परा अनुसार तलाक दिदै घरबाट निकाले ।
अहिले मेरो जेठो छोरा १० वर्षको, माईलो ९ वर्षको र छोरी ५ वर्ष कि भएकि छिन । श्रीमानले विदेशमा छदा पठाएको पैसाले एक कटठा जग्गा किनिदिए र उनैले र सासुले लिएको व्याज सहितको सापटीहरु पनि तिरे । उनले कहिल्यै मलाई कुनै गहना बनाईदिएनन र मैले मांगेन पनि । तर मलाई पन्चहरुको सामनेमा तलाक दिए लगतै मसंग श्रीमानले गहना र पैसा दिएको भन्दै म माथी झुठा कुरा लगाएर मलाई त्यो दिन भने । मैले लिए पो दिनु मलाई क्षतिपुर्ति र वच्चाहरुको भरण पोषण गर्न नपरोस भनेर ममाथी झुठा आरोप लगाए ।
हजुर अहिले बुबा आमाको घरमा शरण लिएको छु । तर मसंग पैसा छैन कति दिन बुवा आमा कै घरमा शरणार्थी जिवन विताउन सक्छु र ? म माथी भएको अन्यायको भन्दा पनि वाल वच्चाको विचल्ली भएको पिडाले मलाई सताएको छ । जुन परिवारलाई आफ्नो जिवनको १३ वर्ष दिए त्यसै परिवारले एक्कैछिनमा मलाई परायी बनाए । मैले उनलाई न्यायको लागि प्रयास गर्छु भन्दै सान्त्वना दिएर फर्काए । अहिले सोच्दैछु मुस्लिम समुदायमा एक पटक श्रीमानले तलाक दिएको खण्डमा पुनः त्यही श्रीमानसंग वस्नलाई अर्को विहे गरि ति श्रीमानसंग तलाक लिएर पुनः पहिलो श्रीमानसंग विहे गरि मात्र वस्न सकिन्छ । त्यहा त कानुन समेत विवश छ । जिल्ला कै पर्सा देवाडमा वर्ष दिन अगाडी फोनबाट तलाक दिईएको घटनामा समेत तत्कालिन नायव प्रहरी उपरिक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठले दुईपक्ष विच मिलापत्र गराएर पठाएका थिए आज उनीहरु खुशी छन तर त्यहा पनि उनीहरुले आफ्नो धार्मिक रिती पुर्याउनु पर्यो । उनले समेत अर्कैसंग विहे गरि उनीसंग तलाक लिएर पुनः पहिलो श्रीमानसंग विहे गर्नु पर्यो ।
हाम्रो समाज भित्रका धार्मिक मान्यताहरुको सामुने कानुन पनि लाचार देखिन्छ । कानुनले लिखित तलाक मात्र मान्छ तर हाम्रो समाजमा मौखित तलाक दिने चलन पनि नया होईन । यहा गाउ कै पन्च भलादमीहरुको आडमा कतिपय कानुन विपरितका कार्यहरु गरिएकै छ । आखिक किन त एउटी महिलालाई यतिको यातना सहन विवश गरिन्छ त ?
महिला अधिकारकर्मी रेखा झा बताउछिन यस घटनामा जे भयो त्यो निक्कै लज्जास्पद छ । कानुनले त्यसतो अधिकार कसैलाई दिएको छैन । तपाईलाई असन्तुष्टी छ भने कानुनी रुपमै सम्बन्ध विच्छेदको लागि उजुरी हाले भैगो नि । अर्को कुरा मिलापत्र भैसकेको अवस्थामा ससुराली पक्षले गरेको यस्तो अमानविय व्यवहारको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौ र तुरुन्त यस घटना प्रति कानुनी उपचारको लागि मांग समेत गर्दछु ।
महोत्तरीका प्रहरी उपरिक्षक जनक भटटराईले समेत यस्ता तलाकको कुनै कानुनी मान्यता नभएको र यस घटनामा महिलालाई न्याय दिलाउन आफु प्रतिवद्ध रहेको जनाएका छन । महिला र उनको वच्चाहरुले पाउने हरेक कानुनी अधिकारको रक्षा गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । पिडितको लागि आवश्यक सवै सहयोग हामी गर्छौ उनी प्रतिबद्धता जनाउछन ।
लागु औषध सहित एक पक्राउ
महिलाको शंकास्पद मृत्यु,बलात्कार पछि हत्या भएको आशंका
watch live appan tv
Copyright © 2017 bhumionline. All rights reserved.